चितवन । सन् २०१९ को छ महीनामा जिल्लामा ५४ नयाँ एचआइभी सङ्क्रमित भेटिएका छन् । जिल्लाको विभिन्न स्थानमा गरिएको सात हजार ८०१ जनाको रगत परीक्षणका क्रममा सो सङ्ख्यामा सङ्क्रमित भेटिएका हुन् । योसँगै जिल्लामा अहिले एक हजार ७६४ सङ्क्रमित पुगेको भरतपुर अस्पतालमा रहेको एन्टी रेट्रो भाइरल थेरापी सेवा केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार उनीहरुमध्ये ८८९ ले नियमित औषधि सेवन गर्दै आएका छन् । अन्य जिल्लाबाट चितवनमा स्थानान्तरण भई आएका ७८...
बुटवल  । परिस्थिति अनुसार दुःख वा खुसीमा रुने गरिन्छ । रुनु सामान्य भावनात्मक प्रतिक्रिया हो । हाम्रो समाजमा रुने मानिसलाई कमजोर मुटु भएको भन्ने गरिन्छ । तर, यो सत्य होइन, अध्ययनका अनुसार आँसु झार्नु शरीर र दिमागका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । जानी राखौँ रुनुका केहि फाइदा: – पीडा कम गराउँछ रुँदा शरीरमा भएको ओक्सिटोकिन र इन्डोजिनियस नामक पीडाको हर्मोन आँसुको माध्यमबाट बाहिर आउँछ । त्यसैले, रोएपछि स्वतः पीडा कम हुन्छ । शारीरिक र भावनात्मक दुवै पीडालाई कम...
काठमाडौं । अविरल वर्षाबाट प्रभावित २८ जिल्लामा पिउने पानीको स्रोत दूषित भएका छन्। बाढी, पहिरोलगायत प्राकृतिक विपत्तिसँगै सरुवा रोगको जोखिम देखिएको चिकित्सकले बताएका छन्। स्वास्थ्य सेवा विभाग, महामारी व्यवस्थापन शाखा प्रमुख डा. प्रकाश शाहले सरुवा र किटजन्य रोगको जोखिम रहेको बताए। झाडापखाला, टाइफाइड, जन्डिस, हैजा, हेपाटाइटिसलगायत सरुवा रोगको जोखिम रहेको उनले बताए। तराईका जिल्लामा लामखुट्टेका कारण औलो, डेंगी, कालाजार, चिकनगुनियालगायत कीटजन्य रोगको उच्च जोखिम रहेको छ। डुबानमा रहेका बस्तीमा दूषित पानीले सरुवा रोगको...
तिलोत्तमा । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा गर्भवती महिला तथा बालबालिकालाई पौष्टिक आहार वितरण गरिएको छ । नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरे र उप–प्रमुख जागेश्वरी चौधरीले सोमबार वडा नं. ४ को सीमानगरबाट पौष्टिक आहार वितरण गर्नुभएको हो । प्रारम्भिक चरणमा वडा नं. ३ र ४ का २४० जना गर्भवती महिला तथा दुई वर्षमुनिका बालबालिकालाई पौष्टिक आहार प्रदान गरिने स्वास्थ्य शाखा ईञ्चार्ज काशिनाथ बञ्जाडेले जानकारी दिनुभयो । आगामी दिनमा ‘उप–प्रमुखसँग गर्भवती महिला’ कार्यक्रममार्फत् पौष्टिक आहार...
गैडहवा । गैडहवा गाँउपालिकामा महामारी तथा प्रकोप व्यवस्थापन सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरिएको छ । गैडहवा गाँउपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, रेडक्रस प्रतिनिधी, बिपद व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधी,खानेपानी तथा सरसफाई समितिका प्रतिनिधी,समाजसेबीहरुका लागि गैडहवा गाँउपालिका स्वास्थ्य शाखाको महामारी तथा प्रकोप व्यवस्थापन,आर आर टी, तथा सि.आर आर टी सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरिएको छ । गैडहवा गाँउपालिकाका अध्यक्ष बच्चुलाल केवटले सो अभिमुखिकरण कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्दै बिपद हर्न बजाएर नआउने तर सोही बिपदले धनजनको...
काठमाडौँ । बाढी, पहिरो तथा डुबानपछि हुनसक्ने सम्भावित स्वास्थ्य जोखिमलाई कम गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय निकायसंँग समन्वय गरी काम थालेको छ । बाढीपछि हुनसक्ने महामारीजन्य रोग रोकथामका लागि मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन समेत दिएको छ । गृह मन्त्रालयसँंगको सहकार्यमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सम्भावित महामारीको जोखिम न्यूनीकरण गर्न काम गरिरहेको जानकारी दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य आपत्कालीन तथा विपद् व्यवस्थापन एकाइ...
मिलन गाहा रुपन्देही । बुुढेशकालमा छोराछोरीले बाबा आमालाई हेर्ने नेपाली परम्परा छ, भने गुुल्मी छत्रकोटका परीवारमा भने परीस्थीतीका कारण ७२ बर्षीय आमाले छोरा छोरीलाई हेर्नुु परेको छ। कहिले काहीं यस्तो बिडम्बना हुुन्छ ,की एकै घरमा ४ जना परीवार अपाङ्ग जन्मीन्छन भनेर कल्पना पनी गर्न सकीदैन । यो बिडम्बना नै मान्नुु पर्छ। यो यथार्थ गुुल्मी क्षेत्र न. २ छत्रकोट गाउपालीका वडा न. ३ नरमका थामी परीवारमा भएको समस्या हो। मानिस जिउनका लागी सपाङ्ग हुुनुु...
३ सयभन्दा बढी बालबालिकामा कुपोषण
दाङ  । दाङमा कुपोषणको उच्च जोखिम देखिन थालेको छ  । सुआहारा परियोजनाकाअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा मात्र जिल्लाका तीन सयभन्दा बढी बालबालिकामा कुपोषण भेटिएको छ । परियोजनाका फिल्ड संयोजक सञ्जयकुमार चौधरीले दाङमा कुपोषणको डरलाग्दो अवस्था रहेको बताउनु भयो  । कुपोषण न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखेर विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यता देखिछ, उहाँले भन्नुभयो। घोराहीमा सबैभन्दा धेरै चालू आर्थिक वर्षमा तीन सय ६० जना बालबालिकामा कडाखाले कुपोषण भेटिएको संयोजक चौधरीले बताउनु भयो  । उहाँका...
कपिलवस्तु । कपिलवस्तु जिल्लामा ३ हजार ४ सय ९६ घरपरिवारका ३६ हजार ५ सय १३ जना स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका छन । जसमा महिला १८ हजार ५९ र पुरुष १८ हजार ४ सय ५१ जना रहेका छन । २०७४ चैत्र देखी २०७६ जेष्ठ मसान्त सम्मको तथ्याङक हेर्दा स्वास्थ्य जिल्लामा रहेका १० स्थानिय तह मध्ये ६ नगरपालिकामा सबै भन्दा धेरै वाणगंगा नगरपालिका नागरिकहरु बीमामा आवद्ध भएका छन भने कम शिवराज नगरपालिकामा...
बुटवल । विभिन्न सामाजिक कार्यमा काम गर्दै आएको गुल्मी चारपाला रुपन्देही सम्पर्क समाजले बुधबार रक्त संचार केन्द्र बुटवलमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । विशेष गरी दिनप्रति दिन बढ्दै गएको सवारी दुर्घटना तथा रक्त अभावमा ज्यान गुमाउनु नपरोस भन्ने उद्देश्यले गुल्मी चारपाला रुपन्देही सम्पर्क समाज द्धारा रक्तदान कार्यक्रम गर्दै आएको छ । सम्पर्क समाजको आयोजनामा बुधबार सम्पन्न कार्यक्रममा ६८ जानाले रक्तदान गरेको सम्पर्क समाजका सचिव विकास टण्डनले बताएका छन् । सो अवसरमा...